Dee N'ihi Ụbọchị My Pet
Jikọọ anyị otu nke oké nkwado.
Anyị na-mgbe ịnakwere oké isiokwu site dere, blọgụ na ejechi akwụkwọ dere. N'ihi na ihe echiche nke ihe anyị na-achọ, biko gụọ site na ụfọdụ nke isiokwu na saịtị. Nke a ga-enye gị ihe echiche nke anyị ụda na ụdị isiokwu ndị na-na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na anyị na-ege ntị.
Ụfọdụ ozi izugbe:
Mkpebi anyị na isiokwu n'akwụkwọ dabeere na merit na kwesịrị ekwesị nke ọ bụla n'otu n'otu isiokwu.
Ọ bụrụ na anyị ekweta na-ebipụta gị Isiokwu nke mbụ, mgbe ahụ a akwụkwọ ozi nke nkwekọrịta ga-aka tupu ugwo a mere na anyị ugbu a ọnụego maka onye ọ bụla isiokwu. Nke a agaghị adị kwekọrịtara na ụdi nnyefe ga-bipụtara. All ụdi nnyefe maka mbipụta a ga-dabere n'uru na kwesịrị ekwesị nke ọ bụla n'otu n'otu isiokwu.
Anyị lekwasịrị na-ege ntị na-US n'elu 18 otu okenye.
Na obere wezụga, isiokwu kwesịrị n'etiti 600-1000 okwu.
Aha nke ọdịnaya na-arụ ọrụ nke ọma nwere ike adjectives, nọmba (eg anatara) na ajụjụ.
All isiokwu nnyefe ga-mbụ na mgbe bipụtara tupu.
Dere nwere ike ahọpụta na-mọ dere ma ọ bụ nwere ha profaịlụ bipụtara na saịtị.
Iji nyefee otu isiokwu ka a tụlee, biko kpaliri isiokwu na-:
nrubeisi AT datemypet.com
IHE: Nnyefe si gị n'ụlọnga ma ọ bụ azụmahịa azụmahịa ga-atụle on a abụghị ugwo ndabere